GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Ụfọdụ ndị na-ekwu na ha na-efe Chineke, ma, ha amaghị ihe bụ́ “okwukwe.” Gịnị bụ okwukwe? Gịnị mere anyị ji kwesị inwe ya?
Gịnị bụ okwukwe?
IHE ỤFỌDỤ NDỊ NA-EKWU
Ọtụtụ ndị na-eche na onye nwere okwukwe bụ onye na-ekwere ihe a gwara ya, n’achọwaghị ịma ma ihe ahụ ọ̀ bụkwa eziokwu. Dị ka ihe atụ, mmadụ nwere ike ikwu na ya kwere na Chineke, ma, a jụọ ya ihe mere o ji kwere, ya asị na ọ bụ maka na a na-akụziri ya kemgbe ya dị obere na Chineke dị. E lewe okwukwe anya otú a ụfọdụ ndị si ele ya, ọ pụtara na ịghọgbu onye nwere okwukwe araghị ahụ́.
“Okwukwe bụ atụmanya e ji n’aka na ihe ndị a na-ele anya ha ga-emezu, ihe àmà doro anya na ihe ndị a na-adịghị ahụ anya dị adị n’ezie.” (Ndị Hibru 11:1) A ga-enwerịrị ihe mmadụ ji n’aka ga-eme ka obi sie ya ike na ya ga-enweta ihe ọ na-atụ anya ya. Okwu e si sụgharịta okwu bụ́ “atụmanya e ji n’aka” apụtaghị naanị mmadụ iji obi ya niile kwere ihe, kama, ọ pụtara na e nwere ihe gbara ọkpụrụkpụ onye ahụ ji n’aka mere obi ji sie ya ezigbo ike n’ihe ahụ.
“Àgwà [Chineke] ndị a na-apụghị ịhụ anya ka a na-ahụ nke ọma malite mgbe e kere ụwa gaa n’ihu, n’ihi na a na-aghọta ha site n’ihe ndị e kere eke, ya bụ, ike ebighị ebi ya na ịbụ Chineke ya.”—Ndị Rom 1:20.
Gịnị mere anyị ji kwesị inwe okwukwe?
‘Ọ bụrụ na okwukwe adịghị, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị Chineke ezi mma, n’ihi na onye na-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị, na ọ bụkwa onye na-akwụ ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.’—Ndị Hibru 11:6.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, ihe mere ọtụtụ ndị ji kwere na Chineke bụ naanị na a kụziiri ha na Chineke dị. Ha nwere ike ịna-ekwu na ọ bụ ihe ahụ ka a kụziiri ha kemgbe ha dị obere. Ma, Chineke chọrọ ka obi sie ndị na-efe ya ike na ọ dị adị nakwa na ọ hụrụ ha n’anya. Ọ bụ ya mere Baịbụl ji kwuo na anyị kwesịrị ịchọsi ya ike, ka anyị nwee ike ịmata ya nke ọma.
Gịnị ga-enyere anyị aka inwe okwukwe?
Baịbụl kwuru na “a na-esi n’ihe a nụrụ enwe okwukwe.” (Ndị Rom 10:17) Ọ pụtara na ihe mbụ ga-enyere mmadụ aka inwe okwukwe na Chineke bụ onye ahụ ‘ịnụ’ ihe ndị Baịbụl na-akụzi banyere ya. (2 Timoti 3:16) Ịmụ Baịbụl ga-enyere gị aka ịmata ihe bụ́ azịza nke ajụjụ ndị dị́ ezigbo mkpa. Ụfọdụ n’ime ha bụ: Ònye bụ Chineke? Gịnị na-egosi na ọ dị adị? Ihe gbasara m ọ̀ na-emetụ ya n’obi? Olee otú Chineke chọrọ ka ihe dịrị anyị n’ọdịnihu?
Ọtụtụ ihe gbara anyị gburugburu na-egosi na Chineke dị adị
Ndịàmà Jehova ga-enwe mmasị ka gị na ha mụwa Baịbụl. Anyị kwuru n’ebe anyị na-edebe ihe n’Ịntanet, sị: “Ịmụrụ ndị mmadụ Baịbụl na-atọ Ndịàmà Jehova ụtọ. Ma anyị anaghị agwa mmadụ na ọ ga-abụrịrị Onyeàmà Jehova. Kama, anyị na-emeda obi kọwaara onye ahụ ihe Baịbụl kwuru, hapụzie ya ka o jiri aka ya kpebie ma ọ̀ ga-ekweta ihe anyị kụziiri ya ma ọ̀ bụ na ọ gaghị ekweta.”
N’eziokwu, ọ bụ mgbe mmadụ gụrụ Baịbụl, ma chọpụta otú ihe ndị ọ gụtara na ya si bụrụ eziokwu, ka ọ ga-enwe ike inwe okwukwe. Ị na-eme otú ahụ, ị ga-eyi ndị a kọrọ akụkọ ha na Baịbụl, bụ́ ndị “ji oké ịnụ ọkụ n’obi nabata okwu Chineke, na-enyocha Akwụkwọ Nsọ nke ọma kwa ụbọchị iji mara ma ihe ndị a hà dị otú ahụ.”—Ọrụ Ndịozi 17:11.
“Iji nweta ndụ ebighị ebi, ọ dị ha mkpa ịmata gị nke ọma, onye naanị ya bụ ezi Chineke, matakwa onye i zitere, bụ́ Jizọs Kraịst.”—Jọn 17:3.
Ị̀ ga-asị na ọ bụ ịjụ ndị nkụzi, ịjụ ndị agadi, ka ọ̀ bụ ịgụ Baịbụl?